ကျောက်ကပ်ကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ခြင်း – Healthy Life Journal
Posted on ဇှနျ 23, 2020
Q. သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ကျောက်ကပ်အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါဆရာ။ သူ့ကျောက် ကပ်က efficiency ကျနေပြီး၊ ဆရာဝန်က ကျောက်ကပ်သက်တမ်းက နောက် ၁၀ နှစ်လောက်ထိပဲ ရတော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အိမ်လည်းမပြောဘူး၊ ဆေးလည်းမကုဘူး ဒီတိုင်းပဲ ပေနေပါတယ်။ အသက်က ၃၀ ကျော် ယောက်ျားလေးပါ။ အစားထိုးကုဖို့မလွယ်ဘူး၊ ကုလည်းမကုချင်ဘူး ပြောပါတယ်။ တခြားဘယ်လိုနည်းလမ်းများ ရှိမလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ရုံနဲ့ ကျောက်ကပ်အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ပျက်စီးမသွားအောင်ရော ထိန်းလို့ရပါသလား။ ဘာတွေစားပြီး ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
A. လူတွေမှာရှိတဲ့ ကောင်းနေတဲ့ကျောက်ကပ်နှစ်လုံးက စစ်ထုတ်ပေးနေတာဟာ အသက် ၃၀-၄၀ ကျော်လာတာနဲ့ လျော့နည်းကျဆင်းလာတယ်။ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်ရှိတိုင်း ၁၀% ကျလျော့လာတယ်။ အဲဒီဇရာဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ပြီး ကျောက်ကပ်ကို ရောဂါတွေမရစေအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါတယ်။
၁။ ဆီးချို၊ သွေးတိုးနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေရှိနေရင် စနစ်တကျ ဆေးဝါး + အစားအသောက် + လူနေမှုပုံစံ ပြုပြင်နေပါ။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ အများစုဟာ မူရင်းရောဂါတခုခု ဥပမာ- ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ သွေးတိုးကနေ ဆက်ဖြစ်တယ်။ ထိန်းရမှာတွေကတော့ သကြားဓာတ်၊ (ကိုလက်စထော) နဲ့ ဆားဖြစ်တယ်။ ရောဂါရှိနေရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာဆေးတွေကိုလည်း ပုံမှန်သောက်နေရမယ်။
၂။ ဆား (ဆိုဒီယမ်)လျှော့ပါ။ သွေးတိုးတက်စေတယ်။ ကျောက်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိတယ်။
၃။ ရေကိုနေ့တိုင်း သောက်နိုင်သမျှသောက်ပေးပါ။ ကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဆီးထဲစွန့်ထုတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကို အထောက်အကူရစေမယ်။ သွေးထုထည်ကိုလည်း မနည်းစေဘဲ၊ သွေးစေးပျစ်တာကိုလည်း ကာကွယ်ရာကျတယ်။ အစာချေတာကိုလည်း ကူညီမယ်။ ကိုယ်အပူချိန်လည်း ထိန်းထားပေးမယ်။ တနေ့ရေ(၁၀)ခွက် သောက်ပါ။
“ လူတွေမှာရှိတဲ့ ကောင်းနေတဲ့ ကျောက်ကပ်နှစ်လုံးက စစ်ထုတ်ပေးနေတာဟာ အသက် ၃၀-၄၀ ကျော် လာတာနဲ့ လျော့နည်းကျဆင်းလာတယ်။ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်ရှိတိုင်း ၁၀% ကျလျော့လာတယ်။ အဲဒီဇရာဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ပြီး ကျောက်ကပ်ကို ရောဂါတွေမရစေအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါတယ်။”
၄။ ဆီးသွားချင်လာရင် အောင့်မထားပါနဲ့။ သွေးကို စစ်ထုတ်မှုလုပ်ရာကနေ ဆီးဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ဆီးကို ဆီးအိမ်ထဲမှာ သိုလှောင်ထားတယ်။ ဆီးအိမ်တင်းလာရင် ဆီးသွားချင်လာမယ်။ ဆီးအိမ်က ဆီးတွေအများကြီးဆန့်ပေမဲ့ ၁၂၀-၁၅၀ စီစီရှိလာတာနဲ့ ဆီးသွားချင်စိတ်ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒီအခါ ဆီးသွားလိုက်ပါ။
၅။ အစားအသောက်မှန်ကန်ပါစေ။ ပြုပြင်စီမံထားတဲ့၊ ဆိုင်မှာ အလွယ်ရအစားအသောက်တွေ၊ Junk food ခေါ် ခေတ်ပေါ်အစားအသောက်တွေ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဟော်မုန်းဆေးသုံးပြီး စိုက်ထား၊ မွေးထားတဲ့အသားနဲ့ အသီးအရွက်တွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ပါ။ ငါး၊ ကညွတ်၊ အစေ့အဆံတွေ၊ ကြက်သွန်ဖြူ စတာတွေသင့်တယ်။
၆။ သောက်စရာရွေးပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးဖျော်ရည်တွေ သောက်ပါ။ ကော်ဖီ၊ ကေဖင်းပါဖျော်ရည်တွေ ရှောင်ပါ။ (အောက်ဇဲလစ်အက်စစ်)ပါတာမျာတဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ မရမ်းရောင်မုံလာဥ၊ မသင့်ပါ။ ကျောက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အုန်းရည်ကောင်းတယ်။
၇။ အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ အရက်ကနေ ဓာတ်ဆားအချိုးအဆကို ပြောင်းစေတယ်။ ကျောက်ကပ်ကို သက်ရောက်စေမယ့် ဟော်မုန်းကိုလည်း ပြောင်းလဲစေတယ်။ ဆေးလိပ်ကနေ ကျောက်ကပ်ကို တိုက်ရိုက်မသက်ရောက်ပေမယ့် ကျောက်ကပ်အလုပ်ကို နှေးစေတယ်။ တခြားရောဂါရလာရင် ပိုဆိုးစေမယ်။
၈။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်(နေ့စဉ် ဒါမှမဟုတ် တပတ်မှာ ၅ ရက်)လုပ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်များတာက ကျောက်ကပ်အတွက်လည်း မကောင်းစေပါ။
၉။ ဆေးကို ကိုယ်ကြိုက်သလိုသောက်တာ မလုပ်ပါနဲ့။ ဆေးတွေကို များသောအားဖြင့် ကျောက်ကပ်ကနေ စစ်ထုတ်ပေးနေတယ်။ ဆေးအဆ(အလေးချိန်)၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ သောက်မယ်ဆိုတာကို စနစ်တကျ သိထားပြီး လိုက်နာပါ။
၁၀။ အားဆေးတို့ ဟာဗယ်ဆေးတို့ သုံးချင်ရင် နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားပါ။ ဗီတာမင်များတာကအစ မသင့်ပါ။
Related Items:Featured, Kidney, Kidney Diseases, self care
ကျောက်ကပ်အားနည်းတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ . . .